Nyefee: Agụnala Nzukọ Ọgbakọ | Martech Zone
Monday, September 16, 2013 Fraịdee, June 8, 2018 Douglas Karr
Ọ dị ka izu ole na ole ọ bụla m na-asụ ude ka m na-atụ uche n'ọgbakọ ọzọ na ọtụtụ ndị enyi m na-ekwu okwu ma ọ bụ na-aga. Ọ naghị amasị m anaghị m agbali…
Nyefee na-enwe olileanya ịgbanwe na na tagline Ekwela Ka A Ghara Nzukọ Ọzọ.
Ha ebipụtawo manifesto na saịtị ha, mpaghara 10 ebe anyị nwere ike melite ogbako ahụ:
Na-achọ n'ịntanetị maka nzukọ nwere ntụpọ. Naanị ma ọ bụrụ na ịnwale nyocha nsonaazụ dịka ọnọdụ, mmasị, asụsụ na oge. Ọ bụ ụdị ndụ niile ebe nyocha adaghị.
N’oge a ị nwere ike na-efu na nnukwu ogbako ebe ma imaghi. Anyị chọrọ sistemụ ka mma ka anyị wee tinye anyị n'ọrụ. Kama ichọ ogbako ogbako nile di nkpa kwesiri ichota anyi.
kasị ogbako weebụsaịtị na-eme ka ọ dị anyị ka ọ bụ 1999, mana ọ nwebeghị mgbe ọ dị mfe ịmepụta nnukwu ahụmịhe onye ọrụ na ntanetị. Kedu ka anyị ga - esi dozie ọdịiche dị n'etiti ndị na - ahazi na teknụzụ?
Na obere oge na ego dị ka ndị ọrụ na-arụ ọrụ ọ pụtara na a na-amanye anyị ịgafe nzukọ anyị chọrọ ịga. Mana olee otu anyi nwere ike isi sonye na ọgbakọ na-anọghị ebe ahụ? Na ọganihu na njikọta dịpụrụ adịpụ nke a ga-ekwe omume taa.
O siri ike inweta inweta ihe omuma emeputa ma gosiputa ya na ogbako. Ga-ahụ ibe na iberibe agbasasị na weebụ, na netwọk mmekọrịta, na igbe mbata na draịva siri ike. Ma olee ebe ị na-enweta foto zuru ezu ma chọta ihe ị na-achọ?
Na ọdịbendị anyị gụrụ akwụkwọ puru omume nke otu onye ma karịa ndị otu narị na abụọ na-ebelata kwa ụbọchị. Kedu ka anyị ga - esi jiri teknụzụ mee ihe ghuta kwa amam-ihe n’ime uche nile dị ebube ịga nzukọ ọgbakọ gị ọzọ?
Taa ị na-amaghi onye na-aga ogbako ruo mgbe ị nọ ebe ahụ. Ma mgbe ogbako ahụ ị na-emezighi mmekọrịta gị na onye ị zutere. N'ezie, a ga-enwerịrị ụzọ ka mma.
Ọ na-esiri ọtụtụ ndị ike ịgakwuru ndị anyị na-amaghị ma malite ịgwa ha okwu. Kedu ihe kpatara na anyị enweghị ike ịnwe sistemụ ebe anyị nwere ike bido mkparịta ụka tupu ọgbakọ ọgbakọ, wee gaa n'ihu na ọgbakọ ogbako na ọbụlagodi mgbe ịkwụsị?
Ọbụlagodi mgbe anyị nwere anụ ahụ, anyị na-etinyekarị akụkụ nke uche anyị na ndụ anyị n'ịntanetị. Kedụ ka anyị ga-esi mee nke a ka ọ bụrụ ihe dị mma na oghere nzukọ? Ma olee otu anyi ga esi mee mepụta ihe pụtara na mkpọtụ dijitalụ nke na-eyikarị ka ọ bụ nsogbu ọnọdụ maka mmụta miri emi?
Kedu mgbe ogbako na-aga nke ọma? Kedu ka anyị ga-esi tụọ ihe ezi mmetụta nke ogbako, ma maka ndị nhazi, ndị na-ekwu okwu, ebe mgbakọ na ndị bịara ya? Maka dollar ọ bụla emere na ogbako anyị kwesịrị ịmara ụlaghachi nloghachi.
Debanye na soro m na Kpọtụrụ nke mere m ji mara ogbako unu na-aga, imara ebe m na-ekwu okwu, ma anyi nwere ike ijurita ibe anyi!
Tags: ogbako networkinyechọta ogbakoogbako ahiaelekọta mmadụ na netwọk
Sep 19, 2013 na 7: 16 AM
Ndewo Douglas - nnukwu ọkwa na ekele maka inwe mmasị! Na-ajụkwa ase.